यौन प्रसारित संक्रमणहरु तथा जननेन्द्रियका अन्य संक्रमणहरू — Vikaspedia
यौन प्रसारित संक्रमणहरु तथा जननेन्द्रियका अन्य संक्रमणहरू
जननेन्द्रियमा घाउहरू हुने आम कारणहरू
सुरक्षित यौनका लागि समुदायमा गर्नुपर्ने कामहरू
महिला र पुरुष इवेलाई यीन संक्रमण लाग्न सक्छ तर महिलाबाट पुरुषमा भन्दा पुरुषबाट महिलामा यो सजिलै सर्छ । किनकि यौनक्रियाका समयमा पुरुषको लिङ्ग महिलाको शरीरको भित्री भागमा (जस्तै, योनी, मुख वा गुदद्वार) मा प्रवेश गर्दछ। कन्डम प्रयोग नगरी यौनक्रिया गरिएमा पुरुषको वीर्यसँगै रोगका किटाणु र जीवाणुहरू पनि महिलाको शरीरभित्र प्रवेश गर्छन् र जीवाणुहरू महिलाहरूको पाठेघर, डिम्बबाहिनी नली र डिम्बाशयमा संक्रमण हुने ठूलो सम्भावना उत्पन्न हुन्छ । महिलाको जनेन्द्रीयमा घाउ छ भने वा योनीमा संक्रमणको कारणले चरचराईरहेको छ भने, यस्तो अवस्थामा एचआइभी सजिलै सर्ने अवस्था हुन्छ ।
एकभन्दा बढी व्यक्तिहरूसित यौन सम्पर्क रहेको खण्डमा । जति बढी व्यक्तिहरूसँग यौन सम्पर्क हुन्छ ।य' तीमध्ये कुनै एकबाट यौन प्रसारित संक्रमण सर्ने त्यति नै बढी सम्भावना हुन्छ ।
एचआइभी परीक्षण गराउने कोसिस गर्नुहोस्। यौन सम्पर्क राख्दा अन्य यौन प्रसारित संक्रमण वा एचआइभी प्रायजसो संगसंगै सर्न सक्छ। (पृष्ठ २८६ हेर्नुहोस्) ।
पहिलो पटक खटिराहरु देखिएमा, एसाइक्लोभिर' नामको औषधि लिनुपर्छ । यो २०० मिग्रा को चक्कीका दरले दिनमा ५ पटक ७ दिन सम्म वा ४०० मिग्राको चक्की ३ पटक ७ दिन सम्म खानु पर्छ ।
हुन त एसाइक्लोभिर' ले खटिराहरूलाई निको पार्न नसके यस संक्रमणलाई मलुवा, दुखाइ र छोटो अवधीको बनाउन सक्छ ।
तल्लो पेट सुन्निने रोग भनेको महिलाको तल्लो पेटभित्र भएका प्रजनन अंगहरूमध्येको कुनै पनि भागमा हुने संक्रमण हो । यसलाई कोखको संक्रमण' पनि भन्न सकिन्छ ।
योनीको अलिकति भित्रपट्टि २ वटा साना थैलीहरू हुन्छन्। जसलाई बार्थोलिन ग्रन्थीहरू' भनिन्छ । ग्रन्थीहरूले बनाउने तरल रसले योनीलाई भिजाइराख्छ । कहिलेकहिं किटाणुहरू यी ग्रन्थीहरूभित्र पस्छन् र एउटा वा दुवै ग्रन्थीहरू संक्रमित हुन्छन्।
हेपाटाइटीस ‘बी’ (जन्डिस) :हेपाटाइटिस 'बी' भाइरसले गर्ने खतरनाक संक्रमण हो । यो संक्रमण भएपछि कलेजोको बिगार गर्छ । यो संक्रमण पनि एड्सको भाइरसले जसरी नै रोगी व्यक्तिको रगत, याल, वीर्य/योनीस्रावका माध्यमबाट सजिलैसँग खासगरी यौनक्रियाका समयमा एकबाट अर्को व्यक्तिमा सर्छ ।
धेरै मानिसहरू हेपाटाइटिस बी संक्रमण भएपछि आफै निको हुन्छन्। यो रोग लागेका केही मानिसहरूलाई मात्र कहिले निको हुन नसक्ने क्यान्सर लगायत कलेजोका अन्य समस्याहरू हुन सक्छन्। हेपाटाइटिस बी' भएमा जतिसक्दो आराम गर्नुपर्छ र सजिलैसँग पच्ने खालका खानाहरू खानुपर्छ । कम्तीमा ६ महिनासम्म जाँड, रक्सी जस्ता पेय पदार्थहरू पिउनु हुँदैन । गर्भावस्था र हेपाटाइटिस : गर्भवती भएको बेला यी लक्षणहरू देखा परेमा स्वास्थ्य कार्यकर्तालाई जचाउँनु पर्दछ । जन्मिने बच्चालाई हेपाटाइटिस बी' लाग्नबाट सुरक्षित राख्नका लागि महिलाले खोप लगाउनुपर्ने हुनसक्छ ।
यौनक्रिया गर्दा जहिले पनि कन्डमको प्रयोग गर्नुपर्छ । आफ्नो यौनसाथीलाई गर्न सकिने कन्डम प्रयोग गर्न उत्साहित गर्ने काइदाबारे जान्नका लागि पृष्ठ नं. १८८ मा हेर्नुहोस्।
यौन संक्रमण समुदायका लागि नै एक स्वास्थ्य समस्या हो । समुदायमा वा गाउँमा रोगको समस्यालाई रोक्नका लागि निम्न लिखित कार्यहरू गर्न सकिन्छ :
महिला तथा पुरुषहरूलाई उनीहरूको र परिवारका सदस्यहरूको स्वास्थ्यमा हुने यौन संक्रमणको खतराबारे बताउन । यो काम गर्न महिलाहरू भेला भएका स्थान र समयमा जस्तै हाटबजार गएको बेला, स्वास्थ्य केन्द्रमा लाममा बसेको समयमा अवसर मिलाउनुहोस्। त्यस्तो अवसरमा उनीहरूलाई यौन संक्रमण कसरी सर्छ र यसको रोकथामका उपायहरूबारे जानकारी दिनुहोस्।
पुरुषलाई कन्डम लगाउन मनाउने उपायहरू पत्ता लगाउनका लागि अरू महिलासँग पनि छलफल चलाउनुहोस्। तपाईंको जोडीलाई कन्डमको प्रयोग गर्न मनाउन के भन्ने बारेमा समूहमा अभ्यास गर्नुहोस्।
कन्डम (महिलाका समेत) हरू समुदायमा सजिलै पाउन सकिने व्यवस्था गर्नुहोस्। स्थानीय औषधि पसल र स्वास्थ्य कार्यकर्ता र स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा निःशुल्क वा सस्तोमा किन्न सक्ने उपाय गर्नुहोस्।
समुदायमा अन्य पुरुषहरूलाई कन्डमको प्रयोगबारे सिकाउन पुरुषहरूलाई तालिम दिनुहोस्।
समुदायमा स्वास्थ्य समस्याहरूका साथै यौन प्रसारित संक्रमण, एच.आई.भी.र एड्स पनि समावेश गरेर छलफलका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुहोस्। कसरी यौन प्रसारित संक्रमणहरूको रोकथामले एच.आई.भी.संक्रमण र एड्स फैलन पनि रोक्छ भन्नेबारेमा व्याख्या गर्नुहोस्।
स्थानीय विद्यालयहरूमा यौनशिक्षा दिलाउनका लागि समर्थन र सहयोग गर्नुहोस्। बालबालिकालाई यौन प्रसारित संक्रमणहरूका साथै एच.आइ.भी.रएड्सबारे शिक्षा दिनु आवश्यक छ भन्नेबारे अभिभावकहरूलाई बुझाउने गर्नुहोस्। यसो गर्दा भविष्यमा उनीहरूलाई यौनक्रिया सुरु गर्ने समयमा सुरक्षित यौन सम्बन्धका उपायहरू छनौट गर्न मद्दत मिल्छ भनी अभिभावकलाई जानकारी गराउनुहोस्।
किशोर-किशोरीहरूलाई यौन प्रसारित संक्रमणहरूका साथै एचआईभी रएड्सबारे उनीहरूका साथीहरूलाई पनि सिकाउन प्रोत्साहित गर्नुहोस्।
केही दिन अघिको कुरा हो । हाम्रो गाउँमा एकजना स्वास्थ्य कार्यकर्ता आएका थिए । त्यसबेला उनले हाम्रो महिला समूहमा आएर यौनरोग, एच.आई.भी./एड्सका बारेमा कुराकानी गर्न सुरु गरे । महिलाहरूमध्ये केहीले उनीहरूलाई यौनरोग लाग्ने कुनै सम्भावना र खतरा नभएको कुरा भने तर स्वास्थ्य कार्यकर्ताले यौनरोग र एड्स रोग के हो, कसरी सर्छ भन्ने कुरा बताउदै जाँदा भने हामीहरूलाई डर लाग्यो । कतै हामीमध्ये कसैलाई यौनरोग लागेको त छैन ! कुरा गर्दागर्दै पुरुषहरूले किन र कसरी कन्डम लिनुपर्छ भन्ने छलफल भयो । र समुदायका मानिसहरूलाई यौनरोगका बारेमा एड्स र छलफलबाट हामीले सम्पूर्ण छिमेकी एड्सबाट बचाउन जानकारी दिनुपर्छ भन्ने निस्कर्ष निकाल्यौं । त्यही समयमा एउटा कल गाउँ आइपुग्यो । गाउँमा देखाउदा गाउँलेहरूले चाख मानेर हेरे । उनीहरूले नाटकबाट धेरै कुरा पनि सिके । यौनरोग र एड्सको कारको टोली सडक नाटक' गर्न 'यौन र एड्स' का बारेमा नाटक छलफल पछि र सडक नाटकपछि मानिसहरू खुलेर - - यौनरोगबाट कसरी बच्ने भन्ने चर्चा गर्न थालेका छन्।
स्वास्थ्य कार्यकर्ताका लागि सुझाव
तपाईंको समुदायमा यौनरोगको उपचारका लागि कुन औषधि उपयुक्त छ भन्ने बारे स्थानीय स्वास्थ्य केन्द्र, अस्पताल वा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट पत्ता लगाउनुहोस्।
मानिसहरूलाई औषधि, कन्डम र शुक्रकीटनाशकहरू लिन सजिलो होस् भन्ने हेतुले सामुदायिक औषधालय सुरु गर्ने कोसिस गर्नुहोस्।
कुराकानी गर्नुहोस्। उनीहरूलाई त्यो रोग कसरी निको पार्ने र अरूलाई संक्रमण हुन नदिन के गर्ने र यस किसिमका रोग हुनबाट पुनः कसरी बच्ने भन्नेबारे राम्ररी जानकारी दिनुहोस्। उनीको जोडीले पनि उपचार गराउनु पर्छ भनेर जोड दिनुहोस्।
परिवार नियोजन कार्यक्रमहरूमा यौनरोगहरू र एच.आई.भी./एड्स रोकथामका उपायहरूको पनि जानकारी दिनुहोस्।
यौन प्रसारित संक्रमण लागेको व्यक्ति मद्दत लिन तपाईंकहाँ आयो भने उसलाई कुनै दोष नदिई सामान्य व्यवहार गर्नुहोस्। यौनरोग र अन्य स्वास्थ्य समस्याहरू भएका व्यक्तिहरूको कुरालाई गोप्य राख्नुहोस्। उनीहरूको समस्याबारे अन्य मानिसहरूसँग कहिल्यै कुरा नगर्नुहोस्।
तलका विषयमा जानकारीका लागि यौन स्वास्थ्य' पृष्ठ १८१ हेर्नुहोस् :
यौन र लैङ्गिक भूमिकाहरू
महिलाहरूको यौनसम्बन्धका बारेमा हानिकारक विश्वासहरू
कसरी सुरक्षित यौन सम्पर्क राख्ने ?